Sidee Bulshadu u tahay B2B? | Martech Zone
Sidee Bulshadu u tahay B2B?
Talaado, Oktoobar 30, 2012 Douglas Karr
Waxaan kaliya weydiinay, Maxay Iibintaadu Ahayn Mid Bulshadeed? sidaa darteed xogtan macluumaadka ah si fiican looma qaban karo! 61% Suuqleyda Mareykanka ayaa adeegsanaya baraha bulshada si ay u kordhiyaan jiilka hogaaminaya. Sidee Bulshadu u tahay B2B waa faahfaahin muuqaal ah oo ka socota InsideView oo bixisa xoogaa tirakoobyo adag ah iyo tusaalooyin waaweyn oo ku saabsan sida ganacsiyada ay uga faa'iideysanayaan warbaahinta bulshada si ay u kobciyaan iibkooda ganacsi iyo natiijooyinka suuqgeynta. Raadinno badan iyo dhaqso badan ayaa xirmaya… miyaad u baahan tahay wax badan oo sabab ah?
Boqol jeer ayaanu sheegnay… laakiin rajadaadu durba waxay ku jirtaa bulsho raadinta alaabadaada iyo adeegyadaaga. Su’aashu waxay tahay maxaad ujoogi la’dahay?
Tags: b2bb2b warbaahinta bulshadajiilka ledKordhinta Iibkawarbaahinta bulshada
Noocyada Boostada Gaarka ah ee leh Qeybaha Gaarka ah
Oktoobar 31, 2012 at 5:36 AM
Waad ku mahadsan tahay tan mar labaad infographic. Weligaa kamaad gaabin inaad daboosho mowduucyada noocan oo kale ah ee aad ku dhejiso marwalba iyo ka dib. Waan jeclahay sida aad u muujisay nooca B2B ee habka ganacsiga ee baraha bulshada laakiin hal su'aal oo kaliya, miyuu shaqeeyaa markaad wali tahay mid bilow ah? mise waa inaad marka hore dhisto sumcaddaada internetka?
Oktoobar 31, 2012 at 11:55 AM
@Hezi Waxaan aaminsanahay in bilowgu uu yeelan karo saameynta ugu badan marka la fiiriyo inay jirto rabitaan aan caadi aheyn oo ah helitaanka alaab cusub, adeegyo iyo codsiyo khadka tooska ah ah. Waxay qaadataa waqti iyo dardar si loo dhiso kalsoonidaas iyo maamulkaas, in kastoo!
Nov 30, 2012 at 4: 49 AM
Ganacsiyo aad iyo aad u tiro badan ayaa bilaabay inay adeegsadaan websaydhka si ay inbadan u kaxeeyaan
socodka bogga ganacsigooda iyo Twitter, waa kuwa ugu badan
siyaabaha caanka ah ee loogu isticmaalo warbaahinta bulshada suuqgeynta.